काठमाडाैं । ... ए कोरोना, शुभ-प्रभात कस्तो छ तिमीलाई ? ooo तिम्रो आगमनले विश्व हल्लियो विज्ञानको आँगनमा मृत्यु हाँस्न थाल्यो अनुसन्धान र उपचार सिमाना र पर्खालले विभक्त भए । मेरो भाषा, मेरो देश, मेरो भूगोल– जय होस् ! ooo कति लज्जित छ मानवता र, यो सभ्यता...}
काठमाडाैं । ... निष्पट्ट औंशीको रात र, त्यो निद्राको घुराई ! स्नेहिल स्पर्शले उनको वदनमा कुत्कुती लगाउन थाल्दा आफ्नै उमेर र यौवन सम्झेर आफैंलाई आत्मग्लानी भयो । उता उनी संघर्षरत थिइन् । पराल र छ्वालीको तन्नामा रगडिँदै भुइँ कोपर्दै, भित्तो चिथोर्दै ! रिस्ता निभाउँदै थियो, सायद, आज उनीस...}
काठमाडाैं । मलाई २०७३ सालको तिहार सम्झन मन लाग्यो । जतिखेर कार्तिक १४ गते लक्ष्मीपूजा परेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङकाे नेतृत्व थियाे । याे वर्ष कुलमानको पहिलो कार्यकालकाे सुरुवात पनि थियाे । लोडसेडिङले देश आक्रान्त भइरहेकै बेला उज्यलो पर्व परेक...}